အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ရာသီလာစဉ် အလွန်အမင်း နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
7.5.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
Primary Dysmenorrhoea ဆိုတဲ့ ဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိဘဲ နာကျင်ခြင်းတွေဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
နို့သီးခေါင်းက အရည်ထွက်တာ ပုံမှန်လား?
6.5.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
တစ်ခါတလေမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အပေါက်အချို့ကနေ အရည်တွေ ထွက်လာတတ်တာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အံ့ဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ။ တချို့ကိစ္စ (ဥပမာ...
4.5.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် ရနိုင်ပါတယ်။ 28 ရက်တစ်ကြိမ် ဓမ္မတာ လာနေသူတစ်ယောက်ဟာ 14 ရက်တိုင်းမှာ သားဥကြွေတတ်ပေမယ့် 35 ရက်ကနေ 42 ရက် ရာသီစ...
2.5.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
နို့သီးခေါင်းနဲ့ သားမြတ်တစ်ဝိုက်မှာ အဖြူစက်တွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ ရုတ်တရက် လန့်သွားကြမှာပါ။ ကံကောင်းထောက်မတာကတော့ အများစုမှာ ဒီလိုအဖြူကွက်တွေ ပေ...
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
1.5.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
>> အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးအကြောင်း
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးဆိုတာ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်...
22.4.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး2ဦးသားကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒီရေလို စိတ်အတက်အကျမြန်ပြီး တောင်တန်းများလို စိတ်အတက်အကျ များတာဟာ အမျိုးသမီး...
ရာသီ မှန်၊ မမှန် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
21.4.2018 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဒီမေးခွန်းဟာ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်တွေ အမေးအခံရဆုံး မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းကို 28 ရက်ကနေ 32 ရက်လို့ ပျမ်း...
ရုတ်​တရက်​တစ်​​ယောက်​​ယောက်​က အပူအိတ်​​လေးနဲ့ လာကပ်​လိုက်​သလို ဖိန်းခနဲရှိန်းခနဲ ဖြစ်​ရတဲ့အ​ကြောင်းရင်း​တွေဟာ ​သွေးဆံ...